Iinkalo zesicelo se-betaine surfactants
Njengesixhobo sokuhlamba ulwelo, ihydroxybetaine inokunyibilika kwamanzi kuluhlu olubanzi lobushushu kunye nefuthe elifanelekileyo lokuhlamba. Ingasetyenziswa kwizithako zokuhlamba ulwelo ezinobuninzi obuphezulu. I-alkylamide betaine inokunyuka okunamandla okurhabaxa, ukucaphuka okuphantsi, kwaye amagwebu azinzile, kwaye inokusetyenziswa kwizicoci nakwisepha ezingamanzi ezenziwe ngeshampoo propyl betaine. Inolusu oluphantsi kunye nokukhuseleka okuphezulu, kwaye inemvakalelo yolusu ethambileyo.
I-Betaine isetyenziswa njenge-emulsifier kwii-emulsions zokuthambisa. Isisombululo sayo sizinzile, sinokusasazeka okufanelekileyo xa sisetyenziswa eluswini, sinesiphumo esihle sokhathalelo lolusu, kwaye sineempawu ezintle zokubulala iintsholongwane kwaye sisityebi kwisondlo kulusu.
I-Betaine esekwe kwi-amphoteric surfactants isetyenziswa kwiishampu ezinama-anionic kunye ne-non-ionic surfactants ngenxa yokugwebu kwabo okuhle, ukungcola, ukhuseleko kunye nokumelana namanzi anzima. Ukunciphisa ukucaphuka kunye nezinye iziphumo.
Abancedisi bempahla eyolukiweyo, ukuprinta kunye nokudaya
Ukuphuhliswa kwe-betaine amphoteric surfactants evela kwisicelo kumzi mveliso wempahla eyolukiweyo. I-Betaine amphoteric surfactant yenye yezona ndidi zinemichiza ezinzileyo. Igcina iimpawu ze-amphoteric kunye nozinzo lweekhemikhali kuluhlu olubanzi lwe-pH. Ke ngoko, i-betaine amphoteric surfactant ifanelekile njenge-arhente yokulinganisa, isetyenziswa njengearhente yokumanzisa, iarhente yokukhuhla, i-antistatic kunye ne-softening agent kwi-sulfation yoboya.
I-Betaine amphoteric surfactants inokusetyenziswa njenge-microemulsifiers kunye ne-dispersants. Xa ii-betaine amphoteric surfactants zisetyenziswa kwi-styrene emulsion polymerization, amasuntswana amancinci ahanjiswa kancinci (50-100μm) inokufunyanwa. I-alkyl betaine amphoteric surfactants isetyenziswa njenge-emulsifiers ye-styrene polymerization. Xa i-latex ihlanjululwe ngamanzi kwaye igcwele kwibhetshi yesilika, i-acrylic okanye iikhaphethi zenylon, zinokunciphisa amabala; I-dodecyl kunye ne-tetradecyl beet i-Alkali inokusetyenziswa njenge-arhente yokumisa i-aqueous polymerization ye-vinyl chloride; uninzi lwee-latexes ze-allyl zenziwe ngobukho be-lauryl betaine esezantsi okanye i-coco-betaine; i-alkyl betaine isetyenziswa njenge-emulsifier ye-cationic latex, kunye ne-cationic emulsifier, esetyenziselwa ngokukodwa iindlela zeekhemikhali zokuhamba, ukusebenza kwayo kunamandla ngakumbi kune-non-ionic emulsifier; I-betaine amphoteric surfactant inokusetyenziswa ekulungiseleleni i-emulsion yeefoto, i-stearyl betaine kukulungiselela kunye ne-emulsifier ye-monomer alkyl acrylate kunye ne-acrylonitrile kwi-gelatin-ehambelanayo ne-hydrosol epolishwe. I-sol igcina uzinzo kuluhlu olubanzi lwe-pH kwaye isetyenziswa njenge-emulsion yeefoto.
Izongezo zokubuyisela ioyile
I-Betaine amphoteric surfactants isetyenziselwa ukubuyisela ioyile yesibini kunye nokubuyiselwa kweoyile ephezulu, kwaye ukusasazeka kwayo kuluncedo ngakumbi kulwakhiwo lekalika; ukufuduswa kweemicememulsion eziqukethe i-betaine okanye i-acyl betaine amphoteric surfactants inokuphucula ukuPhuculwa kweoyile; I-alkyl betaine amphoteric surfactants isusa i-carbonate ore. Ngenxa yokuba ii-betaine amphoteric surfactants zinobunyibilikisi obugqwesileyo kwisisombululo se-saline, azisayi kuphazanyiswa ziionic calcium ion; I-C12 ~ 14 ye-alkyl Chain sulfite betaine yintsholongwane ebulala iintsholongwane ekunciphiseni isulphate, enokusetyenziselwa ukuphucula ukubuyiswa kweoyile kunye nokucokiswa kweoyile ekrwada.
Icandelo lezonyango kunye nezempilo
I-Betaine amphoteric surfactants inokusetyenziselwa amayeza, amayeza, ibhayoloji kunye nezinye izinto ezinxulumene noko. I-alkyl betaine inefuthe elithile kunye ne-eninoomeric amino acid kunye ne-molekyuli ehambelana neziyobisi; I-betaine amphoteric surfactant inokusetyenziswa njenge-transdermal adsorption accelerator yamachiza anyibilikayo amanzi e-ionic; I-betaine amphoteric surfactant inokunyusa ukukhutshwa kwezithako ezisebenzayo kwizithambiso eziqukethe i-neomycin sulphate kunye ne-chloramphenicol; I-Sultaine ilungele ukwahlula nokucoca iantigen kwiinkqubo zebhayoloji, kwaye inokusetyenziswa njengezenzi zokugonya kunye nezenzi zokuqonda isifo; ezenziwe ngamasuntswana eSultaine Virus anamandla anamandla okuthintela ukuveliswa kwentsholongwane kwimiphunga yeempuku ezigonyelweyo; Isisombululo esinamanzi se-cetyl sultaine sisetyenziselwa ukulibazisa ukufakwa kwezicubu ezifakwe emzimbeni, ezinjengezicubu zentliziyo yevalvu ye-pericardium tissue, eza kulungiswa ngaphambi kokulungiswa. Ifakwe kwisisombululo se-sulfobetaine amphoteric surfactant; Isisombululo samanzi se-alkyl betaine amphoteric surfactant kunye ne-non-ionic surfactant ilungele ukunyanga ukutsha kunye nefomula yonyango ebomvu kunye nedumbileyo; alkyl betaine amphoteric surfactant Surfactants nazo ziyasebenza ekunyangeni izilonda zesisu. Xa zisetyenziswa ngamachiza e-salicylate, anokunciphisa okanye akhusele izilonda zesisu ezibangelwa luxinzelelo lwe-salicylate; Isisombululo se-octyl sulfobetaine Xa sahlula i-mitochondria, sinokuthintela ukulahleka kwe-mitochondrial carnitine. Xa uxinizelelo lwe-sulfobetaine lufikelela kumaxesha aliqela oxinzelelo olufunekayo lokuthintela ukudluliselwa, lunokuthintela i-carnitine acetyltransferase kunye ne-carnitine palmitate transferase.
I-alkyl betaine amphoteric surfactant yinto elungileyo yokugqiba isikhumba, enokwenza ulusu lube lukhuseleke ngakumbi ekucoceni komile; ukongeza i-betaine amphoteric surfactant kwi-alkenyl yerabha inokuthintela ukudubula kwesalfure okuqulethe iarhente ye-vulcanizing; I-stearin Acyl betaine yinto elungileyo yokusasaza, enokuphucula ukusebenza ngokutyibilikiswa kwamanzi kwamalahle kunye nokususwa kothuli; I-betaine amphoteric surfactants esetyenziswe kwibhotile ine-adhesion emanzi kunye nokumelana neqabaka; ukwenziwa kwesinyithi sombala, ngakumbi ezo fomula i-Aluminium inokudityaniswa nepeyinti enganyangekiyo emanzini ukuthintela umngcipheko wokuqhushumba, kwaye wenze ukutyabeka kube nembonakalo yentsimbi, umphezulu ogudileyo, ukubambelela okuhle kunye nokugxothwa kwamanzi I-sulfobetaine amphoteric surfactant Isetyenziselwa ukulungisa izinto zokurekhoda ngemagnethi, xa izinto zokuthambisa ze-methylsilyl zigqunywe zii-betaine amphoteric surfactants, ukunqongophala kwezinto zokuhambisa ulwazi lweediski ezixineneyo ezivezwe kubushushu obuphezulu kunye nokufuma okuphezulu kuncitshisiwe; equlathe i-sulfobetaine amphoteric I-resin ye-surfactant inokuyisasaza ngokufanayo umgubo wemagnethi ngamasuntswana acocekileyo, ngaloo ndlela isandisa amandla ombane; I-lauryl amidopropyl betaine isetyenziswa njengenye yezinto ezinesisombululo esimanzi esicocekileyo ukucoca ifayibha yeglasi. Ukufiphala okubalulekileyo kuyenzeka; ukongeza ii-betaine amphoteric surfactants kwizichumisi kunokonyusa ubomi beshelfu yezichumisi ezingamanzi ukusuka kwiiveki ezili-15 ukuya kwezingama-27. Oku kufezekiswa ngokulibazisa ukwenziwa kwemimandla enemagnesium kwaye kufanelekile ukuba kwenziwe inkqubo emanzi ye-phosphoric acid ammoniation Production; I-Betaine amphoteric surfactant inokusetyenziselwa ukwenza ubhedu, itin, zinc kunye nezinye izinyithi ukufumana iialloys eziqaqambileyo.